पटक–पटक बलात्कृत मैले सहयोग पाउँछु त ? |
पटक–पटक बलात्कृत मैले सहयोग पाउँछु त ?
प्रकाशित मिति :2017-11-30 13:30:27
मेरो नाम विपना (नाम परिवर्तन गरिएको छ) हो । म अहिले १६ वर्षकी भएँ । मेरो घर उदयपुरको गाइघाट हो । मेरा बुबा आमा झापा भद्रपुरको एउटा उद्योगमा मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले म उहाँहरूसँगै चार बर्ष अघि भद्रपुर आएँ ।
भद्रपुरको एउटा स्कुलमा पढदै थिए । त्यतिबेला मेरो उमेर त्यस्तै १२ बर्षको थियो । नाताले मेरै फुपाजु पर्नेले मलाई बलात्कार गर्यो । अहिले ती ब्यक्ति जेलमै छन् ।
त्यो घटनापछि हामी स–परिवार भद्रपुरबाट गाइघाट फर्किनुपर्यो । बलात्कारको पीडा बोकेरै भएपनि मैले पढाइलाई निरन्तरता दिएँ । गाइघाटको स्कुलमा ६ कक्षामा पढदै थिएँ । भद्रपुरमा बस्दा बुबाआमासँग सामान्य चिनजान भएकी भारत घरभई भद्रपुरमा माछा मासुको व्यापार गर्ने शान्ति सहनीले जागिर लगाइदिन्छु, राम्रो ठाउँ छ, कमाइ पनि राम्रो हुन्छ भनेर फकाइन् । मिठामिठा कुरा गरिन् । घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर थियो ।
बिरामी बुबालाई छोडेर घरबाट अनुमति लिई म भद्रपुर आएँ । यौन सम्बन्ध भनेको के हो भन्ने समेत थाहा नपाएको उमेरमा आफ्नैबाट बलात्कारको पीडा खेपे । काम गरेर राम्रो कमाउने र बुबा आमालाई सुख दिने सपना बोकेर तिनै शान्ति सहनीको कुरामा विश्वास गर्दै भद्रपुर पुगे । सायद भाग्यमै सुख थिएन होला, त्यहाँ मेरो जीवनमा झन् दुःखको बाढी नै गयो ।
सहनीले घरमै बन्धक बनाइन् । हुन त उनी मेरी आमाकी मित होइनन् तर मलाई मितआमा भन्नु भनिन् । एक दिन मलाई बजार घुमाउने निहँु पारेर घरबाहिर लगिन् । एउटा होटलमा लगेर छाडिन् । तैले यहि काम गर्नुपर्छ अब भनेर भनिन् । मैले गर्नुपर्ने काम के हो थाहा थिएन । त्यो दिन होटलकै मान्छेले मलाई जर्वजस्ती गर्यो । ती मित आमा भनौदीले मलाई अब तैले गर्ने काम यहि हो भनिन् । जब मैले यो कुरा थाहा पाएँ म छागाँबाट खसेझै भएँ । दिनका दिन मैले आफनो अस्मिता लुटाउँनुपर्दाको पीडा र मानसिक तनावको भारी कति ठूलो थियो, शब्दमा भन्न सक्दिन ।
कुनै दिन त सात सात जनासम्मले बलात्कार गरे । तीनै सहनीले त्यस्तो धन्दा चलाएकी रहिछन् । उनको घरमा बन्धक भएर बस्नु परेको थियो । होटलदेखि गाडी आउथ्यो, अनि जानु पथ्र्यो । भाग्ने उपाय थिएन । होटल साहुले कसैलाई भने ज्यान मार्ने धम्कि दिएका थिए । मेरा हातमा एक रुपियाँ पनि पर्दैनथ्यो । म बलात्कृत भएको सबै पैसा तीनै सहनीले लान्थिन् ।
एक दिन तीन जना बालिकालाई भारत लैजान लाग्दा प्रहरीले ती बालिकालाई नाकाबाटै फर्काएछ । शान्ति सहनी भने भाग्न सफल भइछन् । शान्ति सहनी फरार भएपछि ती दिदीहरूको बयानका आधारमा मलाई पनि एउटा संस्थाले उद्धार गर्यो । म घर फर्कन चाहन्छु । पढ्न चाहन्छु । विगतको जिन्दगी बिर्सिएर समाजमा नमूना बनेर केहि गर्न चाहन्छु । तर घरको पारिवारिक अवस्था एकदमै नाजुक छ । खेतीपाती केहि पनि छैन । बुबा पनि बिरामी हुनुहुन्छ । कसैले सहयोग गरेमा पढेर म जस्ता हिंसा प्रभावित, बलात्कृत महिलाको पक्षमा काम गर्ने धोको छ । खै, कसले गरिदेला र मेरो सपना साकार ?
अम्विका भण्डारीको सहयोगमा लिलाराज भट्टराईको प्रस्तुति